xooga Milatari ee qaaradda Afrika oo Djibouti meel ka soo galin halka Koonfurta Suudaan ay gashay kaalinta 18 aad – Xeernews24
24. Juli 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Qaahira-(Xeernews)-Dalka Masar, ayaa dhinaca millateriga ugu awood badan qaaradda Afrika, waxana soo raaca waddamada Aljeeriya, Itoobiya, Nayjeeriya iyo Koonfurta Afrika, sida lagu sheegay warbixin ay dhawaan daabacday hay’adda Global Firepower (GFP) oo inta badan cabbirta awoodda millateri ee dawladaha caalamka.
Waxa hay’addu sheegtay in 30 dal oo laga soo xulay Afrika ay yihiin kuwa hoggaaminaya dhinaca awoodda millateriga. Dalka Masar oo hoggaanka u haya qaatadda waxa uu caalamka kaga kaga jiraa kaalinta 12aad amma waxa uu kaalinta 12aad kaga jiraa 126 waddan oo hay’adan cabbirtay. Dhinacayda Masar ku awood badan tahay waxa ka mid ah dhinaca millateriga qalabka uu haysto ee ay ku difaaci karaan hawada, badda iyo waliba shidaalku sida uu ugu filan yahay haddii xaalad dagaal timaad dalkeeda. Waxa kale oo ku jira warshadaha hubka sameeya ee waddamaasi leeyihiin inta ay le’eg tahay.
Dalka Soomaaliya oo colaado ba’an saameeyeen, isla markaana aan awood badan lahayn, ayaa hadda dhinaca millateriga ka galay kaalinta 29aad dalalka Afrika ugu awoodda badan.
Haddaba, dalalka hay’adda GFP ka soo xushay in ay hoggaanka ugu hayaan dhinaca millateriga qaaradda Afrika waxa ay kala yihiin;
5. Koonfur Afrika
10. Jamhuuriyadda Dimoqraadiga Kongo
15. Jad (Chad)
18. Koonfurta Sudan
23. Ivery Cost
27. Jamhuuriyadda Koongo
30. Jamhuuriyadda Badhtamaha Afrika
Is barbardhig lagu sameeyey Dekada Djibouti iyo tan Barbara Garoonka Diyaaradaha Cadan ee Dalka Yeman oo dib u bilaabay howlhiisi